Fanariana vy tsy misy fangarony - fanariana famatsiam-bola vy tsy misy fangarony - fanariana fantsom-pifamoivoizana vy very - fanariana Minghe
Serivisy fanariana vy tsy misy fangarony - Fantsom-pako vita amin'ny vy tsy misy fangarony orinasa China
IATF 16949 MANKATSITRA CAST HANAO FOTSINY SUS
Inona no atao hoe casting vy? Fanariana vy na famoahana fampiasam-bola vita amin'ny vy, fizotran'ny solika. Izy io dia dingana fanariana ambany na ambany fanapahana. Teknolojia fanodinana tena tsara izy io ao amin'ny indostria fanoratana. Manana fampiharana isan-karazany izy io. Tsy mety amin'ny famoahana karazana sy alika isan-karazany fotsiny izy io, fa koa mamokatra casting miaraka amina refy marina, avo kokoa noho ny fomba fanariana hafa ny kalitaon'ny haavony, ary na ny sarotra aza, mahatohitra ny maripana avo lenta, ary sarotra ny mandrindra casting izay sarotra apetraka amin'ny fomba casting hafa dia azo alefa amin'ny casting casting.
Tombontsoa azo avy amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony (fanariana vy tsy miangatra):
Hery matanjaka tokoa
Ny fanoherana sy ny harafesina tsara
Formability tsara sy weldability
Fahadiovana miaraka amina fahazoan-dàlana tena tsara
Fampisehoana tsara amin'ny maripana ambony / ambany
Raha mitady mpamatsy fanariana matihanina ianao mba hanomezana ampahany betsaka amin'ny fanodinana fividianana vy Stainless Steel, Minghe dia iray amin'ireo mpanamboatra mora indrindra sy mahay indrindra, manokana amin'ny fizotran'ny fampiasam-bola Stainless Steel amin'ny fitaovana fanariana mandroso. Miaraka amin'ny traikefa lehibe sy fahalalana malalaka, ny fitaovantsika fanariana dia mety hahatratra ny fandeferana fatratra eo amin'ny famokarana faobe famokarana vy sy vokatra. Ny injenieran'ny tetik'asa sy ny masinina efa za-draharaha dia handinika tsara ny tetikasanao ary hanodina azy amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny fandefasana vola hihaonana amin'ny famaritana ny famolavolana anao, sady manatsara ny fotoana sy ny vidinao. Miara-miasa amina karazana vy tsy voatanisa izahay hamokarana ny zava-drehetra ary fanariana savoka maty ho an'ny indostrialy maro. Azafady mba mifandraisa aminay amin'ny famoahana sy fametahana milina manokana.
Mifandraisa aminay ny injenieran'ny fantsom-by tsy misy fangarony anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
Casting fampiasam-bola tsy misy vy
Tany am-piandohan'ny 1910, dia hita fa rehefa mihoatra ny 12% ny atin'ny Cr amin'ny vy dia manana harafesina tsara sy fanoherana oksizena izy. Ankoatry ny fananana mihoatra ny 12% Cr, ny vy tsy manara-penitra dia misy koa singa iray na maromaro hafa, toy ny Ni, Mo, Cu, Nb, Ti, ary N2.
Ny fanariana vy tsy manara-penitra dia tsy mety amin'ny fanipazana karazana sy alloys isan-karazany, fa koa mamokatra casting miaraka amina refy avo lenta sy avo lenta noho ny fomba fanariana hafa. Na ny fomba fanariana hafa aza dia sarotra ny manipy sarotra, mahazaka hafanana avo, ary sarotra ny manodina casting. , Azo alefa amin'ny fandefasana fampiasam-bola.
Ny dingana antsoina hoe fanodinana famatsiam-bola dia ny fampiasana fitaovana mora azo (toy ny savoka na plastika) mba hanaovana maodely azo aleha (antsoina hoe fampiasam-bola na modely), apetaho firakofana firakotra misy reflexaire manokana eo amboniny, ary avy eo maina sy henjana. . Aorian'ny famoronana akorandriaka iray, ampiasao ny etona na ny rano mafana handrendrika ilay modely avy ao anaty akorandriaka, avy eo apetraho ao anaty boaty fasika ny akorandriaka, fenoy fasika maina ny manodidina azy, ary apetraka ao anaty lafaoro fandrahoana amin'ny alalàn'ny hafanana avo ny lasitra. (raha bobongolo mahery vaika no ampiasaina, dia azo esorina mivantana tsy misy maodely ny akorandriaka aorian'ny fanesorana azy. Aorian'ny fandroahana ny bobongolo na ny bobongolo dia alatsaka ao anatiny ny metaly metaly mba hahazoana casting.
Ny haavon'ny refin'ny fampiasam-bola dia avo lenta, amin'ny ankapobeny hatramin'ny CT4-6 (CT10 ~ 13 ho an'ny fanariana fasika ary CT5 ~ 7 ho an'ny fanariana maty). Mazava ho azy, noho ny fizotry ny sarotra amin'ny famatsiam-bola, misy antony maro izay misy fiatraikany amin'ny refin'ny refy toy ny bobongolo. Ny fihenan'ny fitaovana, ny fanovana ny lasitra fampiasam-bola, ny fiovan'ny akorandriaka amin'ny akoran'ny fanamainana sy ny fampangatsiahana, ny fihenan'ny firaka ary ny fiovaovan'ny fanariana mandritra ny fizotran'ny fanamafisana, sns. avo ny fampihenana fampiasam-bola mahazatra, saingy ny fanarahana azy kosa dia mila hatsaraina hatrany (ny haben'ny tsy fitovizan'ny casting miaraka amina savaivony antonony sy avo dia tokony hatsaraina betsaka).
Rehefa manindry ny lasitra fampiasam-bola dia ampiasaina ny karazana tsindry miaraka amin'ny famolahana ambonin'ilay lava-kazo, ka somary avo ihany koa ny malama amin'ny lasitra fampiasam-bola. Ankoatr'izay, ny akorandriaka dia vita amin'ny fonosana marefo vita amin'ny adhesive hafanana avo lenta sy fitaovana marefo, izay mifono amin'ny lasitra famatsiam-bola, ary ny atin'ny lavadrano izay mifandray mivantana amin'ny vy metaly dia manana malama tsara. Noho izany, ny famaranana ny fametrahana fampiasam-bola dia avo kokoa noho ny cast amin'ny ankapobeny, amin'ny ankapobeny mahatratra ny Ra.1.6 ~ 3.2μm.
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fanariana fampiasam-bola dia satria ny fametrahana ny fampiasam-bola dia manana ny refy avo lenta sy ny famaranana ny habakabaka, ny asa fanodinana dia azo ahena, fa ny karama fametahana milina kely fotsiny sisa tavela amin'ireo faritra misy fepetra takiana ambonimbony kokoa, ary na dia ny casting sasany aza dia manana Leave famindram-pahefana fikolokoloana sy famolahana, ary azo ampiasaina tsy misy fanodinana mekanika. Azo jerena fa ny fampiasana ny fomba fanariana fampiasam-bola dia afaka mamonjy fitaovana milina marobe sy fanodinana ora-maro, ary mamonjy akora metaly be dia be.
Tombony iray hafa amin'ny fomba fanariana fampiasam-bola dia ny fandefasana casting sarotra amin'ny alika isan-karazany, indrindra ny fanamafisam-peo amin'ny hafanana avo lenta. Ohatra, ny lelan'ny motera jet, ny mombamomba azy ary ny lavaka mangatsiaka, dia zara raha noforonina tamin'ny teknolojia fanodinana. Ny famokarana amin'ny alàlan'ny fanodinana famatsiam-bola dia tsy vitan'ny fanatanterahana famokarana betsaka fotsiny, hiantohana ny tsy fitoviana amin'ny casting, fa koa hialana amin'ny fifantohan'ny fihenjanana amin'ireo marika antsy sisa taorinan'ny fanodinana.
Ny fitaovana fanariana vy tsy misy fangarony
Ny vy tsy misy fangarony dia azo zaraina ho sokajy telo matetika, dia ny vy antonony martensitika antonony sy matanjaka ho an'ny rafitry ny injeniera, vy tsy mahazaka harafesina ary vy mahatohitra hafanana.
Steel tsy miova Martensitika matanjaka sy matanjaka: ao anatin'izany ny vy vy martensitika sy ny vy mihamafy. Amin'ny fampiharana injeniera, ny toetra mekanika no mpanondro lehibe indrindra, ary mahatohitra ny haino aman-jery atmosfera sy ny haino aman-jery manimba (toa ny rano sy ny akora biolojika sasany) harafesina tsara. Ny firafitry ny metallographic dia martinsite ambany karbaona.
Steel tsy miady amin'ny harafesina: fantatra ihany koa amin'ny vy vy tsy mahazaka sy tsy mahazaka asidra. Tombanany indrindra ny fanoherana ny harafesiny. Azo zaraina amin'ny sokajy roa izy: chromium stainless steel sy nickel-chromium stainless steel. Ny antony lehibe manimba ny fanoherana ny harafesin'ny vy tsy misy fangarony dia ny atin'ny karbôna sy ny habetsaky ny gazy karbaina. Ny karbona dia ambany dia ambany, matetika latsaky ny 0.08%.
Stainless vy mahatohitra hafanana: Ho an'ny vy tsy mahazaka hafanana, satria ny toetran'ny mekanika maripana avo lenta dia miankina amin'ny dingan'ny rotsakorana karibida miorina amin'ny vy, ny atin'ny karbôna dia avo kokoa noho ny vy tsy mahazaka harafesina, manodidina ny 0.20% na mihoatra. Ny mari-pana mahatohitra hafanana an'ny vy vy mahatohitra hafanana dia mety hahatratra 650 ℃
Ny famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny famolavolana vy dia nanjary safidy ho an'ny indostria maro noho ny toetra ara-batana tiany! Ny Stainless Steel dia iray amin'ireo allo indostrialy malaza indrindra amin'ny tetik'asa fanariana maro, noho ny fananana ara-batana tena tsara. Ny tombony etsy ambany dia nahatonga ny ampahany sy ny vokatra Stainless Steel ho safidy tsara ho an'ny indostria sy ny fampiharana maro, na dia izy ireo aza dia manintona manokana amin'ny sehatry ny fitsaboana, ny fiara, ny aerospace, ny fitsaboana ary ny tontolon'ny elektronika mpanjifa. Raha ny fomba tsara indrindra sy haingana indrindra hanaovana ampahany amin'ny Stainless Steel dia ny famatsiam-bola indrindra ny fanariana miaraka amin'ny vy tsy mahazaka harafesina mahatratra lavitra sy malalaka.
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fanariana vy
Safidio ny mpamatsy vy tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fanariana vy vy dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana vy tsy manara-penitra dia manome filanjana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina, ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikasa fanariana vy tsy misy fangarony.